Somalida Itoobiya Oo La Soo Noqday Saddex Degmo Oo Hore Loogu Daray Maamul Gobolleedka Canfarta | Himilo Media Group
Somalida Itoobiya Oo La Soo Noqday Saddex Degmo Oo Hore Loogu Daray Maamul Gobolleedka Canfarta
Diridawa, 05 May, 2019 (Himilo)-Kumanaan kun oo Qof ayaa lagu soo warramayaa inay socod dibad bax ah ku mareen jidadka magaalada Dire Dawa (Dirdhabe) iyo dhowr magaalo oo kale oo hoos yimaada gobolka City ee dalka Ethiopia.
Dadka isu soo baxa sameeyay ayaa taageero u muujinayey go’aan ay qaadatay dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia oo ay kaga noqotay go’aan hore saddex degmo oo maamulkaasi ka mid ah loogu daray maamulka gobolka Canfarta.
Go’aankan ayaa ka soo baxay Golaha Wasiirada dowladda Soomaalida, iyagoo meesha ka saaray go’aamo muddo saddex sanadood haatan laga joogo degmooyinkaasi lagu hoos geeyey gobolka Canfarta oo ku yimid heshiis xukuumaddii hore ee Cabdi Maxamuud Cumar ay la gashay maamulka Canfarta.
Haddaba, waxa lagu soo warramayaa in dadkii mudaaraharaadka dhigayey ee ku dhaqnaa magaalada Diridhaba inay si weyn uga muuqatay farxad, isla markaana ay ku dhawaaqayeen hal ku dhegyo la mid ah amase muujinaya inay iyagoo xorriyada hadda qaatay.
Xisbiga Mucaaridka ah ee Canfarta ee Afar People’s Party ayaa iyagu ka soo horjeestay go’aankan cusub, iyagoo ugu baaqay dowladda Federaalka dalka Itoobiya inay soo fara geliso arrintan.
Saddexdan degmo oo tan iyo markii Canfarta lagu daray uu muran xoogan ka taagnaa ayaa dadka labada dhinacna ay ku dagaalameen dhowr jeer, sidaasi awgeedna waxa la sheegaa inay ku badan yihiin degmooyinkaasi dadka Soomaalida ahi